354 Taxane Ah Oo Aan Cillad Lahayn Oo Is Beddelaya Iibka - Dukaamaysiga Dukaamada Internetka
Guriga Kala-barbaariye la'aan
FMW Beddelka cadayga aan lahayn wax soo saarka this baaxadda ayaa si sax ah loogu talagalay oo loo soo saaray si ay ula jaanqaado taxanaha asalka ah ee AC AC matoorkiisa HCI544 oo ay kujirto faahfaahin farsamo, mid kasta iyo mid kasta, iyo qaabeynta muuqaalka.
FMW jenerater kale ayaa sidaas loogu talagalay in ay si cad u tirtirayaan isbarbardhiga saddex-geesoodka ee mawjadda kuleylka ah oo ay yihiin si ku-habboon loogu talagalay sahay-dhibaato la'aan ka timaad xamuul aan toosan. The jeneraal dabacsan loo been abuurtay iska ilaali wabiyada dhexdhexaadka ah ee xad dhaafka ah markay isbarbar dhigaan labada dhaxe. A si buuxda Dabayl xumaanta isku xidhka ayaa yaraynaysa oscillations inta lagu gudajiro. Dabaylkan oo leh garoonka iyo tiirar si taxaddar leh loo soo xushay iyo nashqadeynta ilkuhu waxay xaqiijineysaa inay aad u hooseyso wareejin mawjad. Istaatirka ugu weyn wuxuu bixiyaa quwadda isagoo adeegsanaya Auto Voltage Regulator (AVR) unugga isuduwaha ee nidaamka xakamaynta is-ku kalsoonaanta. Wax soo saarkan rotorkaan waxaa lagu quudiyaa rotor-ka ugu weyn iyadoo loo marayo sedex waji oo buuxa hagaajinta buundada mawjadaha, oo uu ka ilaaliyo xakamaynta qallafsanaanta qalliinka waxaa sababay wareeg gaaban. Nidaamka korantada ama heerkulka-kor u kaca ee badalkeed waa Class H.
1. Xogta Farsamo ee Beddelka ah ee Kataloolaha (364kw illaa 660kw)
2.Qurbinta iyo Shahaadada
3. Xayeysiis Khariidadda Beddelka-keenaheena
● Heerka 2/3 boodhadhka dabaysha ee loogu talagalay stator.
● Nidaamka cashuur dhaafka aan tooska aheyn ee burushka.
● Qalabka Korantada-Kumbuyuutareedka
● Xakameynta Heerka H oo ay ka midka yihiin varnish gaar ah iyo qalabka colophony oo leh tikniyoolajiyad lacageed oo horumarsan iyo aalado. 180 ℃ kuleylka-adkaysiga.
● Naqshadaynta khafiifka ah ee dabaysha ayaa si wax ku ool ah uga hor tagi kara mawjadaha saddexaad ee is-wada (3, 9aad, 15aad) ee korantada sidaa darteed waa naqshadeynta ugu wanaagsan ee UPS ee culeyska aan tooska ahayn.
● Naqshadeynta tayada sare leh ee AVR waxay xaqiijineysaa faragelin raadiyo hooseysa xagga gudbinta.
● Ilaalinta caadiga ah IP23 waxay ka hortegi kartaa baabi'inta dhibcaha biyaha.
● Ku shaqeynta si ka hooseysa 95% qoyaan yar laakiin bey'ad nadiif ah.
● Rakibaadda habboon iyo dayactirka.
● 10 % culeys xad dhaaf ah 1 saac shaqo iyo 100 % culeyska shaqada joogtada ah
● Alaabada kale: 100 % silsilad naxaas ah, birta oo idil oo bir-qaboojinaysa, Lacag-xoqitaanka H-ka
● Dejinta korantada-bilaashka ah baaxad ahaan≥ (95-105)% Un
● Heerka sharciyeynta korantada ee-Gobolka-± 1.0 %
● Heerka sharciyeynta korantada kumeelgaarka-Gobolka-State + 20 % / -15%
● Waqtiga soo kabashada tage1.0S
● Saamiga isu beddelka qulqulka ≤. 0.5 %
● Heerka sharciyeynta isdaba-joogga-Gobolka ± 5 %
≤ Heerka sharciyeynta soo noqnoqoshada-Ku-meelgaarka-Gobolka-± 10 ﹪
≤ Isugeynta isu bedbedelka≤0.5 ﹪
≤ Qiyaasta kuleylka korantada / Kuleylka-Heat-State ≤2 ﹪
Resistance Ciribtirida iska caabbinta la tijaabiyay iyadoo la raacayo GB5226.1-2002-19.3
● Gantaal-Voltage-ka la tijaabiyey iyadoo la adeegsanaayo GB755-2000-8.1 (oo la adeegsan karo 1500V illaa 60S)
Res Dhammaan aagagga korantada ee la tijaabiyo iyada oo la raacayo GB5226.1-2002-19.6
Security Amniga mektikada waxaa lagu tijaabiyay si waafaqsan GB / T820.8-2002-6.3
Fire Difaaca / Difaaca Dabka waa la tijaabiyaa iyadoo la raacayo GB / T2820.8-2002-6.4 / 6.5
● Heerarka wax soosaarka oo dhan: GB755, SADDII SADDEXAAD BS 5000, VDE 0530, NEMA
MG1-22, IEC34, CSA C22.2-100 iyo ASB59
354 matoor cilladaysan 354 taxane ah oo aan madal lahayn 354 taxanaha ac alternator Matoor taxane 354 354 burush aan beddelin 354 ac synchronous alternator
Hore : 314 taxane ah oo aan cillad lahayn oo is beddelaya
Xiga : 404 taxane cillad la’aan ah synchronous ac alternator
Mawduuca : 354 taxane ah oo aan cillad lahayn oo is beddelaya
274 taxane cillad la’aan ah synchronous ac alternator
(80kw-220kw) FMW Beddelka cadayga aan lahayn wax soo saarka this Baaxadda waxaa si habsami leh loogu talagalay oo loo soo saaray si ay ula mid noqoto taxanaha asalka ah ee AC AC matoor UCI274 oo ay kujirto faahfaahin farsamo, mid kasta iyo mid kasta, iyo qaabeynta muuqaalka.
314 taxane ah oo aan cillad lahayn oo is beddelaya
(200kw-380kw) FMW Beddelka cadayga aan lahayn wax soo saarka this baaxadda ayaa si sax ah loogu talagalay oo loo soo saaray si ay ula jaanqaado taxanaha asalka ah ee AC AC matoor HCI444 oo ay kujirto faahfaahin farsamo, mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah, iyo qaabeynta muuqaalka.
404 taxane cillad la’aan ah synchronous ac alternator
(600kw-1210kw) FMW Beddelka cadayga aan lahayn wax soo saarka this baaxadda ayaa si sax ah loogu talagalay oo loo soo saaray si ay ula mid tahay taxanaha asalka ah ee AC AC matoorkiisa HCI634 oo ay kujirto faahfaahin farsamo, mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah, iyo qaabeynta muuqaalka.